Okokufundisa Nama-Manuwali we-iPhone | Izindaba ze-IPhone (Ikhasi 4)
Ungahlola kanjani ibhethri elisele lePensela ye-Apple
Ngokungabi nakho ukuholelwa ukusikhombisa izinga lebhethri le-Apple Pencil, i-Apple isinikeza lolu lwazi ngqo kwi-iPad
Amasu amahle kakhulu wokuzuza kakhulu ngeSafari ku-iOS (2/2)
Sikulethela uhlu lwesibili ngamasu amahle kakhulu wokuthola okuningi ku-Safari ku-iOS, njengenjwayelo, okokufundisa okungcono kakhulu ku-iPhone News.
Amasu amahle kakhulu wokuzuza kakhulu ngeSafari ku-iOS (1/2)
Namuhla ngeSonto ntambama sikulethela amaqhinga amahle kakhulu okusiza kakhulu ukusebenzisa iSafari ku-iOS, njengenjwayelo, izifundo ezihamba phambili kwi-iPhone News.
I-Wiseplay, zonke iziteshi zomhlaba kuselula yakho [ISIFUNDO]
Ezinyathelweni ezimbalwa uzoba nazo zonke iziteshi emhlabeni ku-iPhone yakho noma i-iPad, futhi sizochaza ukuthi kanjani, sibonga iWiseplay.
Ungayivimba kanjani i-WhatsApp ekuthumeleni imininingwane yakho ku-Facebook
Njengoba wazi kahle futhi nozakwethu uLuis Padilla exhumane kokuthunyelwe kwakhe nge-WhatsApp nokuthi angenza kanjani ...
Ungawaphatha kanjani amafayela atholwe yi-iOS 10 Messages
Enye yezinto ezintsha ezithakazelisa kakhulu ze-iOS 10, futhi, iMilayezo entsha noma uhlelo lokusebenza lweMessage. Lapha sikutshela ukuthi ukuphatha kanjani lokho abasithumela kona.
Ungayilinganisa kanjani i-iPhone yakho uyinike impendulo engcono yebhesi
Ukulingana kwe-bass kuthuthukisa kakhulu umsindo womculo, kukuvumela ukuthi ube nempendulo engcono kusuka kumahedfoni noma kuzipikha zangaphandle.
Ungangeza kanjani ama-eBooks kuma-iBooks ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes
Ngabe ufuna ukufaka amabhuku we-elektroniki noma ama-eBook kuma-iBooks ngaphandle kokusebenzisa ithuluzi le-iTunes eliyisicefe? Kulokhu okuthunyelwe sikufundisa konke odinga ukukwazi.
Ungasusa kanjani isikhala okuhlala kuso izibuyekezo ze-iOS ku-iPhone naku-iPad
Njalo lapho i-Apple ikhipha isibuyekezo esisha, ilandwa ngokuzenzakalela kuphela kumadivayisi ahambisanayo futhi ...
Dlala i-PlayStation 4 ku-iPhone yakho noma i-iPad ngalesi sifundo [IVIDIYO NAMA-SWEEPSTAKES]
Namuhla sikulethela okokufundisa okumnandi ngohlelo lokusebenza lokukwazi ukudlala i-PlayStation 4 ku-iPad yakho noma i-iPhone kalula futhi ngaphandle kweJailbreak.
Ungasusa kanjani noma Ufihle Oxhumana Nabo be-Facebook ku-iPad noma i-iPhone
Namuhla sizokufundisa ukuthi ungasusa noma ufihle kanjani oxhumana nabo be-Facebook ku-iPhone naku-iPad, ngalesi sifundo esincane sinyathelo ngesinyathelo.
Ingabe i-iPhone yakho iqala kabusha ebusuku? Sikufundisa ukuthi ungayixazulula kanjani
Uma i-iPhone yakho nayo inenkinga yokuqalisa kabusha ebusuku, sizokukhombisa ukuthi ungayilungisa kanjani kalula ngalesi sifundo.
Nendlela Susa Jailbreak kusuka iPad Kalula nge Cydia Isisuli
Sizokwenza ukubuyekeza okuncane nokufundisa ukuthi ungayisusa kanjani iJailbreak usebenzisa i-Cydia Eraser ku-iOS 9.3.3 igxathu negxathu
Ungaliguqula kanjani igama lethu lomsebenzisi ku-Pokémon Go
Kokufundisa kwanamuhla sikukhombisa ukuthi ungaliguqula kanjani igama lomsebenzisi ku-Pokémon Go ngezinyathelo ezintathu ezilula futhi ngaphandle kokulahleka.
Nendlela Susa Jailbreak ku-iOS 9.3.3 kusuka ku-iPhone noma i-iPad
Uma kwenzeka ukhathele yiJailbreak, sizokukhombisa ukuthi uyisusa kanjani iJailbreak kusuka ku-iOS 9.3.3 ye-iPhone ne-iPad, kulula kunakuqala.
Ungasusa Kanjani i-PP Store App Ngaphandle Kokususa i-Cydia
Ngokufundisa kwanamuhla sifuna ukukufundisa ukuthi ungalususa kanjani uhlelo lokusebenza lwe-PP Store ngaphandle kokukhipha i-Cydia, kalula futhi ngokushesha.
Ungasusa kanjani izipele esinazo ku-iCloud
Ku-Actualidad iPad sifuna ukukufundisa ukuthi ungasusa kanjani izipele esinazo ku-iCloud ngendlela elula. Thola okuningi kusitoreji sakho.
Konke mayelana nempepho namamojula we-Pokémon Go
Sizokutshela konke odinga ukukwazi ngempepho nangamamojula we-Pokeparadas wePokémon Go, uthole konke.
Ungacisha kanjani amawijethi wesikrini sokukhiya se-iOS 10
Amawijethi nezaziso eziboniswa kusikrini sokukhiya se-iPhone yethu nge-iOS 10 zingasebenza
Izinkinga ze-GPS ngemuva kwe-jailbreaking iOS 9.3.3? Zama lokhu
Ukuba nezinkinga ze-GPS ngemuva kwe-jailbreaking iOS 9.3.3? Konke kunesixazululo futhi kuza kithi nge-Cydia tweak.
I-Pokémon enhle kakhulu ngokuya ngokuhlasela kwabo, ukuzivikela ne-HP
Sizonamathela emandleni alezi Pokémon ngokuya ngemfanelo yazo ukukhetha ukuthi iyiphi i-Pokémon enhle kakhulu ku-Pokémon Go.
Uhlu lwama-Pokémon alula kakhulu ukuvela ku-Pokémon Go
Ukuguqula ukubonga kwethu kwePokémon kumasikandi athile kuyindlela esheshayo yokuthola ulwazi. Sebenzisa uhlu lwethu lwezinguquko.
Lezi yiPokémon edume futhi ekhethekile ku-Pokémon Go
Le yiPokémon edume futhi ekhethekile ePokémon Go futhi asifuni ukuthi ubaphuthelwe, funda uhlu lwethu lwePokémon.
Ungayisusa kanjani i-watermark lapho usebenzisa iPrisma
Namuhla sizokufundisa ukuthi ungayikhipha kanjani i-watermark uma usebenzisa iPrisma ukuze izithombe zakho zibe njengoba ufuna ngaphandle kokukhangisa.
Uhlu lwePokémon olutholakala kumaqanda e-Pokémon Go
Kungenzeka yini ukuthi iyiphi iPokémon ezochamuselwa eqandeni? Kubukeka sengathi kunjalo. Ngalolu hlu, uzokwazi ukwazi wonke ama-Pokémon atholakala kumaqanda e-Pokémon.
Indlela Jailbreak iOS 9.2 - 9.3.3 nge Pangu
Sichaza igxathu negxathu ukuthi ungakwenza kanjani iJailbreak iOS 9.3.3 usebenzisa iPangu yeWindows. Iyahambisana kusuka ku-iOS 9.2 kuye ku-iOS 9.3.3.
Ungasithola kanjani isipiliyoni sokukhuphuka ku-Pokémon Go
Ku-iPhone ye-Actualidad sifuna ukukutshela ukuthi ungakhuphuka kanjani kalula nokuthi yiziphi izenzo ezikunikeza ulwazi oluthe xaxa emdlalweni.
I-Jolteon, i-Vaporeon noma i-Flareon? Sikukhombisa ukuthi ungabathola kanjani ku-Pokémon Go
Namuhla sifuna ukukukhombisa ukuthi ungayithola kanjani kalula iJolteon, iVaporeon noma iFlareon ngaleli qhinga elilula lokuqamba kabusha igama elithi Evee.
Ungaqala kanjani ku-Pokémon Go ne-Pikachu
Ungaqala kanjani ku-Pokémon Go ne-Pikachu kulula kunalokho ocabanga ukuthi uma ulandela lezi zinyathelo, zithole zonke ngendlela elula.
Umhlahlandlela wePokémon Go, amathiphu namasu wokuzibamba zonke (2/2)
Ezindabeni ze-iPad sizoqhubeka ngamathiphu wethu wePokémon Go namuhla, umhlahlandlela wethu omnandi wamaqhinga nezinqamuleli zePokémon.
Amaphutha ayisithupha mhlawumbe owenzayo lapho udlala i-Pokémon GO
Kuliqiniso: umdlalo wesikhashana nekusasa yiPokémon GO. Uqinisekile uyawenza amaphutha. Lapha sikutshela ukuthi ungazigwema kanjani.
Umhlahlandlela wePokémon Go, amathiphu namasu wokuzibamba zonke (1/2)
Kufanele sikulethele umhlahlandlela ngamathiphu, amaqhinga nezindaba ngePokémon Go. Ngakho-ke ungazibamba zonke ngendlela elula futhi esheshayo.
Ungalonga kanjani ibhethri ngenkathi udlala i-Pokemon Go
Sizokunikeza amanye amathiphu wokonga ibhethri ngenkathi udlala i-Pokemon Go, ukuze ukwazi ukusebenzisa kakhulu uhambo ngalunye nokuzingela iPokemon.
Ungayifaka kanjani i-Pokemon kunoma yiliphi izwe
Ku-iPhone ye-Actualidad sifuna ukukukhombisa ukuthi uyifaka kanjani i-Pokemon GO ku-iPhone yakho yize useSpain noma kwelinye izwe elingatholakali.
Ukucatshangelwa ngaphambi kokwehliswa kusuka ku-iOS 10
Sizoshiya okunye ukucatshangelwa ngaphambi kokwehliselwa phansi kusuka ku-iOS 10, ngoba abasebenzisi abaningi bazothanda ukufika kwe-beta yomphakathi.
Izidingo zokujabulela inketho yokuvula ngokuzenzakalela ye-Apple Watch ku-MacOS Sierra
Isici esisha sokuvula ngokuzenzakalela se-Apple Watch ne-MacOS Sierra sinezidingo abasebenzisi abaningi abangazithandi. Sikukhombisa ukuthi ziyini
Ungakunika kanjani amandla ukufakazela ubuqiniso be-Two Factor ku-akhawunti yakho ye-Apple
Ukuqinisekiswa kwezinto ezimbili kuyadingeka ukusebenzisa ezinye zezici ezintsha ze-iOS 10, iMacOS Sierra ne-watchOS 3. Sichaza ukuthi singakusebenzisa kanjani
UZestia, ungasifaka kanjani lesi enye isitolo eCydia ngaphandle kwejele
Uyamkhumbula uMojo? IZestia ngesinye isitolo esizovumela ukuthi sifake ezinye izinhlelo zokusebenza ezingasekelwa yi-Apple, njengama-emulators adumile.
Ungayifaka kanjani i-Kodi ku-iPhone naku-Apple TV 4
Ungathanda ukufaka i-Kodi ku-iPhone yakho noma ku-Apple TV futhi awazi ukuthi uzoqala kuphi? Yebo, kule ndatshana sikuchazela ngezinwele nezimpawu.
Ungayisusa kanjani iphrofayili ye-beta bese ushiya uhlelo lwe-beta lomphakathi
Uma ukhathele ukuzama ama-betas ahlukile e-iOS, sizokukhombisa ukuthi ungakushiya kanjani, ususe iphrofayili ehambisanayo.
Ungayikhipha kanjani i-beta ye-iOS 10 bese ubuyela ku-iOS 9
Ufake i-beta ye-iOS 10 futhi awukenzi kuyo noma ubona izimbungulu eziningi? Kulokhu okuthunyelwe sizokukhombisa ukuthi ungabuyela kanjani ku-iOS 9 ngokushesha futhi kalula.
IOS 10 kanye nenketho yokuzikhipha ohlwini kusuka kuhlu lwamakheli kusuka kuhlelo lokusebenza lwendabuko
IOS 10 ivumela abasebenzisi ukuthi bazikhiphe ohlwini lwama-imeyili ngqo kusuka kuhlelo lokusebenza lwemeyili lwedivayisi yakho.
[ISIFUNDISISO] Ungayifaka kanjani i-beta engu-10 ye-iOS nesixazululo sephutha le-iTunes 14
Ku-iPad News sethula lesi sifundo ukuze uthole i-beta ye-iOS 10 ngaphandle kokubhalisela i-akhawunti yonjiniyela.
IOS 10 nezindaba zayo
Ku-iOS 10 kukhona izinguquko kubuhle bezaziso, ukuthuthuka esikhungweni sezaziso, iMessage, Amamephu, i-Apple Music nokunye okuningi.
Ungawarekhoda kanjani amavidiyo ngesikrini se-iPhone futhi ngaphandle kwe-jailbreak
Namuhla sikukhombisa isiphazamisi esincane esivumela ukuthi siqophe ividiyo kusuka ku-iPhone lapho isikrini sedivayisi sicishiwe
Ungayibuyisela kanjani i-iPhone ne-iPad yakho ngaphandle kokulahlekelwa yi-jailbreak
Semi-Buyisela ikuvumela ukuba ubuyisele idivayisi yakho ngaphandle kokulahlekelwa Jailbreak yakho. Isibuyekezo esisha manje sesitholakala ngeWindows, Mac neLinux
Isixazululo enkingeni yokukhethwa kombhalo okungajwayelekile ku-iOS
Sikukhombisa isisombululo ezinkingeni esivame ukuhlangana nazo lapho sikhetha umbhalo ozowukopisha kamuva.
Ungazifaka kanjani izingqikithi ku-iPhone yakho ngaphandle kwe-jailbreak
Ufuna ukunika idivayisi yakho ye-iOS ukubukeka okusha kepha ungenayo i-jailbreak? Lapha sikukhombisa ukuthi ungazifaka kanjani izingqikithi ... cishe noma ngaphansi.
Konke odinga ukukwazi mayelana ne-iCloud yokukhiya i-iPhone
Ingabe unayo i-iPhone ekhiyiwe yi-iCloud? Ingabe ICloud ingavulwa? Thola ukuthi ivuliwe nokuthi ungasusa kanjani ngokomthetho ukukhiya kwe-iCloud.
Ungayisebenzisa kanjani i-Apple Pay eSpain (nanoma yiliphi izwe)
Sichaza ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-Apple Pay eSpain noma elinye izwe elingakabi nayo insiza yokukhokha yeselula ye-Apple.
Ungayibuyisa kanjani imicimbi esinyamalale kukhalenda lakho
Sichaza ukuthi kungani eminye imicimbi ekhalendeni lakho iyeka ukuvela nokuthi ungayilungisa kanjani ngokuthola leyo datha ekhalendeni lakho.
Sebenzisa i-Google Amamephu ungaxhunyiwe ku-inthanethi futhi ungasebenzisi idatha yesilinganiso sakho
Funda ukusebenzisa i-Google Maps ungaxhunyiwe ku-inthanethi ku-iPhone yakho bese ulanda amamephu e-google kuselula yakho uma ungenayo i-Intanethi.
Ayikwazi Ukwenza Isipele ku-ICloud: Izimbangela Nezixazululo
Sichaza ukuthi kungani kwesinye isikhathi ungenasikhala sokwenza isipele sakho ku-iCloud nokuthi ungayixazulula kanjani
Imidwebo engu-101 esingayenza nge-Apple Watch
Umhleli weCult of Mac udale imidwebo engu-101 nge-Apple Watch engasebenza njengekhuthazo endalweni yethu.
Ungadlala kanjani kusuka ku-iOS uye ku-Android kalula
Ku-iPhone ye-Actualidad sizokufundisa ukuthi ungayenza kanjani i-AirPlay kusuka ku-iOS iye ku-Android kalula ngohlelo lokusebenza olulodwa futhi ngaphandle kwezinkinga.
Ungayishintsha kanjani i-ID yakho ye-Apple
Sichaza igxathu negxathu nangezithombe ukuthi ungayishintsha kanjani i-imeyili oyisebenzisa ku-ID yakho ye-Apple ngaphandle kokulahlekelwa okuthengile.
Ungayishintsha kanjani i-Apple ID yakho ukuze usebenzise enye i-imeyili
Awusakhululekile nge-Apple ID oyisebenzisayo? Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungayishintshela kanjani enye oyithanda kakhulu.
Ungarekhoda kanjani izingcingo ze-iPhone ngaphandle kwe-jailbreak
Ngabe ufuna ukurekhoda izingcingo ezivela ku-iPhone yakho kepha awunayo i-jailbreak? Yebo, i-iPhone News ikufundisa iqhinga. Ungaphuthelwa!
Unenkinga yokufaka izinhlelo zokusebenza noMojo? Zama lokhu
Isitolo sohlobo lweCydia Mojo sinikeza izinkinga lapho ufaka izinhlelo zokusebenza, akunjalo? Zama le ndlela yakudala ukubona ukuthi iyakuxazululela yini.
Okufanele ukwenze uma i-iPhone yami, i-iPod Touch, noma i-iPad ingavuli
Uma i-iPhone yakho ingavuli, ngaphambi kokuyinika okonakele, kufanele uzame lezi zixazululo. Sikutshela konke odinga ukukwazi.
Amasu wokuthola okuningi ku-WhatsApp ku-iPhone yakho (2/2)
I-WhatsApp inamaqhinga athile okuthola ukusebenza okungcono futhi naku-iPhone ye-Actualidad sifuna ukukutshela konke ngayo.
Ungakhawulela kanjani ukulandela umkhangiso ku-iPhone ne-iPad yakho
Sizokuchaza ukuthi ungakhawulela kanjani ukulandela umkhangiso kokukhangisa ku-iPhone yakho ne-iPad, ngaleyo ndlela singavumeli i-Apple ukuthi yazi lokho esikuthandayo.
Ungazisebenzisa kanjani izithonjana ze-Unicode ku-iPhone yakho naku-iPad
Sizokukhombisa ukuthi ungazisebenzisa kanjani izithonjana ze-Unicode ku-iPhone yakho ne-iPad usebenzisa ikhibhodi efihlekile esigabeni sezilungiselelo zomdabu.
Ungazibuyisa kanjani izithombe ezisusiwe ku-iPhone, i-iPad noma i-iPod Touch
Ngabe izithombe zakho zisusiwe ku-iPhone yakho futhi ufuna ukuzibuyisa? Sikutshela izindlela ezinkulu zokubuyisa izithombe ezisusiwe kusuka ku-iPhone yakho noma i-iPad.
Amasu wokuthola okuningi ku-WhatsApp ku-iPhone yakho (1/2)
Okufanele ukwenze lapho i-iPhone yakho ingaxhumi ku-Wi-Fi
I-iPhone yami ngeke ixhumeke ku-Wi-Fi, yini engingayenza? Ungazama wonke lawo macebiso amancane ukuthuthukisa ukuxhumana kwakho okungenantambo.
Okufanele ukwenze uma i-Apple ID yakho ikhiyiwe
Kungani i-akhawunti yakho ye-Apple ivinjelwe? Yini ongayenza ukuyibuyisa? Sichaza konke okungezansi ngezixhumanisi zamakhasi okusekela.
Ungayisebenzisa kanjani i-PlayStation 4 "Play Remote" ku-Mac
Sichaza igxathu negxathu ukuthi uyisebenzisa kanjani i-Remote Play ye-PlayStation 4 yakho kwi-Mac OS, ukuze ukwazi ukujabulela imidlalo yakho ngokugcwele.
Ungayakha kanjani i-akhawunti ye-Apple yengane esebenzisa Ukwabelana Komndeni
Sichaza ukuthi ungayisebenzisa kanjani i-En Familia ukudala i-akhawunti ye-Apple yengane, lawula ukulandwa kwabo futhi sabelane ngokuthengiwe kwakho.
Ungasikhulula kanjani isikhala ku-iPhone yakho noma i-iPad kalula
Sichaza ukuthi ungawathola kanjani ama-gigs angeziwe kudivayisi yethu sisebenzisa iqhinga elilula
Ungawacisha kanjani ama-tweets apholile ku-Twitter
I-Twitter ingeza izinguquko ukunxenxa abasebenzisi abasha, kepha abanye abazenzi. Sikukhombisa ukuthi ungayivala kanjani inketho "Ngenkathi uhambile".
Ungayisebenzisa kanjani i-bold ne-italics ku-WhatsApp ye-iPhone
Intsha enelukuluku kuWhatsApp ye-iOS, manje sesingabeka umbhalo ngokugqamile, isiteleka kanye nomalukeke. Sichaza ukuthi ungakwenza kanjani.
Kubiza malini ukushintsha isikrini se-iPhone?
Thola amanani entengo yesikrini se-iPhone. Kubiza malini ukushintsha isibonisi se-Apple mobile futhi ungasifaka kuphi? Thola ukuthi kuzokubiza malini.
Ungashayela kanjani ngenombolo efihliwe ku-iPhone
Sichaza ukuthi ungayifihla kanjani inombolo yocingo ku-iPhone kusuka kuzilungiselelo ze-iOS noma ngokufaka ikhodi. Uyazi ukuthi ungashayela kanjani ngenombolo efihliwe?
Happy Chick, i-All-in-One emulator ye-iOS ne-Android ozoyithanda. [Isifundo sokufaka]
Sikhuluma nge-All-in-One Happy Chick Emulator ye-iOS ne-Android futhi sikufundisa ukuthi ungayifaka kanjani kudivayisi yakho, i-NDS, i-PSP, i-PS1, i-Arcade, ingakutshela konke!
Unenkinga ngezixhumanisi ku-iOS 9.3? Zama lezi zixazululo
IOS 9.3 ifikile nge-bug evimbela abanye abasebenzisi ekufinyeleleni izixhumanisi kusuka kuzinhlelo zokusebenza. Uma uhlangabezana nenkinga, zama lezi zixazululo.
Ungazikhiya kanjani izichasiselo kuhlelo lokusebenza lwamaNothi
Besifuna ukukuphathela ividiyo kanye nesifundo esizinyathelo ngesinyathelo sokuthi ungazivimba kanjani izichasiselo kuhlelo lokusebenza lweNothi, zombili ze-OS X, kanye ne-iOS ne-iCloud.
Ungayithuthukisa kanjani i-WiFi yakho yasekhaya usebenzisa i-WiFi PLC
Amanye amadivayisi afana ne-PLC-WiFi angagcina ekuthole ukuthi ube ne-inthanethi kulezo zindawo zendlu lapho isignali ingakufinyeleli ngekhwalithi enhle.
Ungazivikela kanjani izichasiselo zakho ngohlelo lokusebenza olusha lwe-iOS 9.3 Notes
Enye yezinto ezintsha eza ne-iOS 9.3 kungenzeka ukuvikela amanothi nge-password. Sizokutshela konke kulokhu okuthunyelwe.
Ungabuyela kanjani emuva kusuka ku-iOS 9.3 kuye ku-iOS 9.2.1 (okwehliswayo) ngenkathi i-Apple isasayina i-iOS 9.2.1
I-Apple iyaqhubeka nokusayina (okwesikhashana) i-iOS 9.2.1 ngemuva kokukhipha i-iOS 9.3, sikusiza ukuthi ubuyele emuva ngenkathi usenesikhathi (uma ukhona).
Lungisa amadivayisi akho, kungenzeka kakhulu ukuthi i-iOS 9.3 ikhishwe namuhla
Ngalesi sihloko santambama kunamathuba amaningi okuthi i-Apple izokhipha wonke umuntu i-iOS 9.3, sizokwazisa futhi sikufundise ukuthi uwahlela kanjani amadivayisi akho.
Ungazivimbela kanjani izikhangiso ezenzelwe indawo ku-iPhone naku-iPad
Ukuze sikwazi ukujabulela ulwazi noma izinsiza kwi-inthanethi mahhala ngokuphelele, kufanele sikhumbule ukuthi akekho umuntu osebenzayo ...
Ungayenza kanjani i-flash blink ku-iPhone lapho ibizwa
Thola ukuthi ungayenza kanjani i-iPhone flash blink lapho bekushayela noma lapho uthola noma yiluphi uhlobo lwesaziso: ama-imeyili, imiyalezo, njll.
Okufanele ukwenze uma ukhohlwe ukhiye wakho wokukhiya we-iPhone noma i-iPad
Sichaza ezinye izindlela onazo uma ukhohlwe iphasiwedi yakho ukuvula i-iPhone yakho noma i-iPad ngaphandle kokulahlekelwa imininingwane ekuqukethe.
Landa isithombe sesimemo sosuku lwango-Mashi 21
Izolo ntambama, isikhathi saseSpain, u-Apple uqale ukuthumela isimemo kulo mcimbi kwabezindaba ...
Ungakukhubaza kanjani ukugqwayiza kwe-iOS 9 ngaphandle kwe-jailbreak
Ukugqwayiza kohlelo lokusebenza lwe-iOS kuyingxenye eyisisekelo yobuhle bayo. Abasebenzisi abaningi bajabule nge ...
Sikunikeza izixazululo zezinkinga ezivame kakhulu ongazithola usuku nosuku lwe-Appel Watch
Ungayishintsha kanjani i-DNS ukuthuthukisa ukuphequlula kwakho kwe-inthanethi
Ukushintsha i-DNS kungathuthukisa ijubane obhekabheka ngalo kwi-inthanethi. Sichaza ukuthi sikwenze kanjani.
Ungayishintsha kanjani ingilazi ye-iPad Mini yakho
Sichaza igxathu negxathu ukuthi ungayishintsha kanjani ingilazi ye-iPad Mini, inqubo elula ezokuvumela ukuthi wonge imali enhle.
Ungabelana kanjani ngemibhalo nge-WhatsApp
Isibuyekezo sakamuva seWhatsApp sikuvumela ukuthi wabelane ngamadokhumenti nabanye abantu futhi sichaza ukuthi singakwenza kanjani.
Faka i-MAME4iOS ngaphandle kwe-jailbreak nge-Xcode
Sikukhombisa ukuthi uyifaka kanjani iMAME4iOS ngaphandle kwe-jailbreak ukuze ukwazi ukudlala imidlalo ye-MAME ku-iPhone noma ku-iPad ngokuphelele.
Ungabelana kanjani ngezithombe ezisuka kuDropbox noma kuGoogle Drayivu usebenzisa iWhatsApp
Namuhla sikulethela isifundo sokuthi ungabelana kanjani ngezithombe ezisuka kuDropbox noma ku-Google Drayivu usebenzisa i-WhatsApp.
Ungayifaka kanjani i-Clash Royale njengamanje kwi-iPhone yakho, i-iPad noma i-iPod Touch
Kusenezinsuku ezimbalwa kuze kufike omunye wemidlalo ebilindelwe kakhulu, kepha ungathanda ukuthi ungayifaka kanjani iClash Royale manje? Siyakufundisa.
Ungayishintsha kanjani injini yokusesha ezenzakalelayo ku-Safari
Ngokufika kwe-iOS 6, ubudlelwano phakathi kwe-Apple neGoogle babukeka buthuntu ngemuva kokuxoshwa kwezicelo ...
Ungawabuka kanjani amaphasiwedi agciniwe ku-Safari
Nsuku zonke, ikakhulukazi uma sichitha ingxenye enkulu yosuku kude nasekhaya, kungenzeka ukuthi ukufinyelela ...
Ungasifihla Kanjani Isithonjana Somculo We-Apple ku-iPhone
Selokhu kwethulwe i-Apple Music, insiza yomculo entsha yokusakaza yakwa-Apple, ibilokhu ithola kancane kancane ...
Yini okufanele uyenze uma uphonsa i-iPhone yakho emanzini?
Ingabe ulahle i-iPhone yakho noma iselula yakho emanzini? Thola ukuthi yini okudingeka uyenze ukuyomisa ukuze isebenze ngaphandle kwenkinga ngemuva kokumanzi.
Ungazisebenzisa kanjani izintambo ezingekho emthethweni nezinsiza ku-iOS
Ungazisebenzisa kanjani izintambo eziphangiwe noma ezingezona ze-iPhone noma i-iPad nge-iOS ngaphandle kokuthola umyalezo wezesekeli ezingagunyaziwe. Ngabe kungasetshenziswa izesekeli mbumbulu?
Ungayenza kanjani ilogo ye-Apple ku-iPhone 6 ikhanye
Sikukhombisa ukuthi ungalifaka kanjani i-apula elikhanyisiwe ku-iPhone 6 yakho noma i-iPhone 6 Plus ngokushesha nangokushibhile.
Faka (okuqhekekile) izinhlelo ngefomethi ye -ipa
Funda ukuthi ungazifaka kanjani izinhlelo zokusebenza zamahhala ku-iPhone noma ngaphandle kwejele ukulanda izinhlelo zokusebenza ngaphandle kokukhokha bese uqhekeza iselula ye-Apple ukufaka imidlalo ye-ipa
Ungayithuthukisa kanjani i-WiFi yakho ngokushintsha isiteshi se-Router
Sichaza ukuthi ngendlela elula futhi ngaphandle kwezicelo zangaphandle ukuthi ungakuthuthukisa kanjani ukuxhumana kwe-WiFi kwekhaya lakho ukuze uhambe kahle
Ungalivula kanjani ifayili le-.ZIP ngohlelo lokusebenza lwamaNothi
Nge-iOS 9.3 nokubuyekezwa kwayo kohlelo lokusebenza lwamaNothi sizokwazi ukuvula amafayela ngefomethi ye-.ZIP ngaphandle kobunzima obukhulu ngenxa yalesi sifundo.
Ungayithola kanjani i-IMEI ye-iPhone yakho
Izindlela ezinhlanu zokuthola i-IMEI ye-iPhone yakho ukuyivimba uma kwenzeka yebiwe noma uyinikeze ukuvulwa kweselula kwe-Apple.
Ungayivula kanjani imikhawulo yokuqukethwe ku-iPad
Ku-Actualidad iPad sikukhombisa ukuthi singabeka kanjani imingcele kokuqukethwe okungaboniswa ku-iPad yethu.
Ungayifaka kanjani ifolda engafundiwe kuMeyili
Yize uhlelo lweMeyili ukuphatha i-imeyili ku-iOS lishiya okuningi okungafunwa abasebenzisi abanzulu ...
Ungawathumela kanjani amafayela amakhulu nge-Mail Drop
IMail Drop ivele engqungqutheleni yonjiniyela ebibanjelwe e2014 yahlala ibambene ...
Uyini umsizi we-iTunes futhi ukhubazeka kanjani?
Uyazi ukuthi i-iTunes Helper yenzelwe ini? Ingabe uthola iphutha ku-Windows noma kwi-Mac? Funda ukuthi ungayikhubaza kanjani le nqubo uma ikunikeza izinkinga noma ungeke uyisebenzise.
Ungayifaka kanjani i-akhawunti engaphezu kweyodwa ye-Instagram ku-iPhone yakho
Abakwa-Instagram bamemezele ukuthi ushintsho lwama-akhawunti luyatholakala kubo bonke abasebenzisi. Kulesi sifundo sikukhombisa ukuthi uwafaka kanjani amanye ama-akhawunti kuhlelo lwakho lokusebenza.
I-iTunes iyigcina kuphi i-firmware elandwe kusuka ku-iPhone, i-iPad?
Thola lapho i-iTunes igcina khona izibuyekezo ze-iPhone noma ze-iPad kwi-Mac yakho noma i-Windows PC futhi ufunde ukuthi uwavula kanjani amafayela e-IPSW ukuvuselela idivayisi yakho
Landa i-Cydia kunoma iyiphi i-iPhone
Sikutshela ukuthi ungayilanda kanjani i-Cydia futhi ufake inguqulo yakamuva kunoma iyiphi imodeli ye-iPhone ehambisana ne-jailbreak, kufaka phakathi i-iPhone 4 noma eyedlule
Xhuma i-akhawunti yakho ye-Spotify ne-Shazam ukulalela izingoma ezigcwele
I-Shazam ye-iOS iza nekhono lokuxhumanisa i-akhawunti yakho ye-Spotify ukuze ukwazi ukulalela umculo omakwe nge-Spotify kusuka ku-Shazam.
Ungazikhubaza kanjani iziphakamiso zokuxhumana nge-imeyili ku-iPhone
Uma ungawuthandi umqondo weziphakamiso zokuxhumana ngeMeyili ezivela ku-iPhone yakho, namhlanje sikukhombisa ukuthi ungazikhubaza kanjani.
Amathiphu ayi-10 wokuzula nge-Google Chrome ku-iOS
Lapha sethula amathiphu ayi-10 wokuzulazula kangcono nokusebenzisa isiphequluli se-Chrome seselula seGoogle.
Isebenza kanjani i-Localization ku-iOS 9
Izinsizakalo zendawo ye-IOS seziyingxenye ebalulekile yohlelo nokusetshenziswa. Sikunikeza imininingwane yokusebenza kwayo.
Ungasicisha kanjani isici se-Shake to Undo ku-iOS 9
Lapho sisebenza phambi kwekhompyutha yethu futhi nganoma yisiphi isimo senza ushintsho kamuva esingaluthandi, njalo ...
Ngabe ufuna ukusebenzisa i-Night Shift ku-iOS 9.3 ku-Mac yakho? Sikukhombisa ukuthi kanjani
Uma uke wazama i-Night Shift ku-iOS 9.3 futhi ungathanda ukwazi ukuyisebenzisa naku-Mac yakho, kungenzeka. Sikufundisa ukuthi ukwenze kanjani. Kulula kakhulu.
Ungayifaka kanjani i-addons ku-Kodi ye-Apple TV 4
Sichaza kuvidiyo ukuthi uwafaka kanjani ama-addons ku-Kodi wesizukulwane sesine i-Apple TV ngendlela elula kakhulu.
Ngabe unezinkinga ngeSafari? Akuwena wedwa. Sikukhombisa ukuthi ungayilungisa kanjani
Ukuqaphela ukusebenza okungajwayelekile eSafari kwe-iOS ne-OS X? Ungakhathazeki, akuwena wedwa futhi sikunikeza isisombululo sesikhashana.
Linganisa ibhethri le-iPhone
Sichaza ukuthi ungalinganisa kanjani ibhethri le-iPhone ukuze lihlale isikhathi eside futhi namaqhinga athile azokhulisa ukuzimela kweselula ye-Apple. Ungaphuthelwa
Ungayifaka kanjani i-Kodi ku-Apple TV
Sichaza ngezithombe namavidiyo ukuthi ungayifaka kanjani i-Kodi ku-Apple TV, isidlali esiphelele kunazo zonke ongasithola
Ungasikhombisa kanjani noma usifihle isicelo se-iCloud ku-iPhone yethu
Abasebenzisi be-ICloud bahlala bezisola ngokungabi nesicelo ku-iPhone ukufinyelela ...
Okokufundisa: Lungiselela i-iPhone yakho ukuthola okuhle kwebhethri yayo
Ngalesi siqondisi sizokukhombisa ukuthi ungayithuthukisa kanjani impilo yebhethri ye-iPhone yakho ngokwenza kungasebenzi futhi kuguqulwe izici zohlelo ngaphandle kwengozi.
Ngabe udinga ithempulethi yokusika i-SIM khadi yakho bese uyiguqula ibe yi-micro SIM noma i-SIM? Sichaza ukuthi ungayisika kanjani igxathu negxathu.
Ungazilanda kanjani izithombe kuhlelo lokusebenza lwe-Facebook ku-iPhone
Sikukhombisa ukuthi singazilanda kanjani izithombe kwi-akhawunti yethu ye-Facebook kusuka ku-iPhone yethu
Faka isinqamuleli kuzilungiselelo ze-WiFi esikhungweni sezaziso
Ngaleli qhinga ungajabulela iwijethi edala ukufinyelela ngqo kuzilungiselelo ze-Wi-fi zedivayisi yethu ye-iOS ngaphandle kwesidingo se-jailbreak.
Ungayibonisa kanjani ibha yokuzula eSafari ye-iOS
Sikukhombisa ukuthi ungayifinyelela kanjani ibha yokuzula ye-iOS eSafari lapho siphequlula.
Ungawusula kanjani umlando we-Safari nedatha ku-iOS
Ukusula umlando nedatha kusuka ku-Safari ye-iPhone kulula kakhulu. Sikukhombisa ukuthi kanjani.
Ungasishintsha kanjani isivinini sokucindezela inkinobho yokuqala
Ngenxa yezilungiselelo zokungeneka singasetha ijubane lokucindezela inkinobho yasekhaya ye-iPhone yethu.
Ungayisetha kanjani imodi entsha yasebusuku ku-iOS 9.3
Sichaza ukuthi imodi entsha yasebusuku isebenza kanjani ku-iOS 9.3 esivumela ukuthi siphumule kangcono
Ungazifihla Kanjani Izinhlelo Zomkhiqizo ku-iPad / iPhone
Ngalesi sifundo esilula sevidiyo singafihla izinhlelo zokusebenza ezifakwe ngaphambilini kumadivayisi wethu we-iOS.
Ungashintshela kanjani kufoni ye-FaceTime kusuka ocingweni
Sikukhombisa ukuthi singashintsha kanjani sisuka ocingweni siye ocingweni lwe-FaceTime ngaphandle kokulahla ucingo.
Ungasibona kanjani isixhumanisi sesixhumanisi ku-Safari
Sikukhombisa ukuthi ungabona kanjani isixhumanisi esizochofoza kuso kusiphequluli sethu se-Safari se-iOS ne-OS X
Uyisebenzisa kanjani ikhodi yokukhiya enamadijithi amane ku-iPad yakho [VIDEO]
Namuhla kuzindaba ze-iPad sikulethela okokufundisa okunemininingwane eminingi yokuthi uwasebenzisa kanjani amakhodi wokukhiya ahlukene anikezwa yi-iOS 9 kuvidiyo.
Ungayihlela kanjani imodi yokungaphazamisi ku-iOS
Kulesi sifundo sizokufundisa ukuthi ungahlela kanjani futhi ulungiselele imodi yokungaphazamisi kudivayisi yakho ye-iOS. Faka futhi ufunde nathi.
Ungayivimbela kanjani Imeyili ye-iOS ekumakeni izinsuku ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka
KwiMeyili ye-iOS, lapho ithola usuku, ibaphendula ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka uma kwenzeka sifuna ukubalondoloza ekhalendeni. Sikufundisa ukuthi ungakugwema kanjani.
Ungasivuselela Kanjani Ngokushesha Isitolo Sohlelo Lokusebenza se-iOS
Lapho i-App Store ingaphenduli, okwenziwa abaningi bethu ukuyivala ekusebenzeni okuningi, kepha singakuqabula. Sikukhombisa ukuthi kanjani.
Ungayakha kanjani i-akhawunti yonjiniyela yamahhala ongayisebenzisa kuXcode
Kusuka ku-iOS 9 singafaka ezinye izinhlelo zokusebenza ku-iPhone yethu ngeXcode. Nakhu ukuthi ungayakha kanjani i-akhawunti yamahhala ye-Apple.
Ungayisusa kanjani i-akhawunti yakho ye-Spotify ngaphandle kokufa emzameni
Ukususa i-akhawunti yakho ye-Spotify akuwona neze umsebenzi olula, yingakho kwi-iPad News sikukhombisa igxathu negxathu ukuthi ungakwenza kanjani.
Lawula i-Apple TV nge-iPhone yakho ne-Apple Watch ngenxa ye-Remote
I-Apple isinikeza uhlelo lokusebenza olukude esingalawula ngalo i-Apple TV kusuka ku-iPhone yethu noma i-Apple Watch
Ungayikhulula kanjani imemori ye-RAM ngokushesha kwi-iPad yakho noma i-iPhone
Sizokukhombisa indlela yokukhulula imemori ye-RAM kudivayisi yakho ye-iOS ngokushesha ngalesi sifundo esincane.
Ukuqoqwa kwamaphephadonga kaKhisimusi we-iPhone yakho
Ngaleli qoqo elihle lezizinda zikaKhisimusi ungagqoka i-iPhone yakho ukubhekana noKhisimusi.
Ungayakha kanjani i-akhawunti yonjiniyela yamahhala futhi uyihlobanise neXcode
Sichaza izinyathelo zokwenza i-akhawunti yonjiniyela yamahhala nokuthi ungahlobanisa kanjani neXcode ukufaka izinhlelo zokusebenza ku-iPhone yakho, i-iPad ne-Apple TV
Buka ama-DVD wakho kusuka ku-iTunes, iPhone noma i-iPad nge-MacX DVD Ripper Pro (Contest)
Ungayibuka kanjani iDVD ku-iPhone noma kwi-iPad
Ungawasebenzisa Kanjani Ama-Akhawunti Akabili E-Facebook Ku-iPad Yakho Ngaphandle KweJailbreak
Ngalesi sifundo esilula sikukhombisa ukuthi uwasebenzisa kanjani ama-akhawunti amabili we-Facebook kwi-iPad eyodwa ngaphandle kweJailrbreak.
Ungawasebenzisa kanjani ama-akhawunti amaningi we-WhatsApp ku-iOS ngaphandle kweJailbreak
Ngalesi sifundo esilula sikukhombisa ukuthi uwasebenzisa kanjani ama-akhawunti amabili we-WhatsApp ku-iPhone efanayo ngaphandle kwe-Jailbreak.
Ungasifaka kanjani isiginesha kuma-imeyili akho nge-Markup
Ukumaka kungumsebenzi i-iPhone eyizuze njengelifa kumakhompyutha futhi singasayina amadokhumenti ethu ngeposi.
I-Apple TV: Ungashintsha kanjani ngokushesha phakathi kwezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene
Uhlobo olusha lwe-Apple TV luze nezinguquko ezibalulekile ezilingisa izinhlobo zakamuva ze-iOS. Sikutshela ukuthi ungashintsha kanjani phakathi kwezinhlelo zokusebenza ezahlukahlukene.
Ungayilungisa kanjani i-iPhone eqhubeka nokucela igama lomsebenzisi nephasiwedi yakho ye-iCloud
Kwesinye isikhathi i-iPhone ingena ku-loop lapho iqhubeka icela imininingwane yakho yokungena ye-iCloud. Ngosizo lwe-Actualidad iPhone ungayixazulula.
21 I-iPad ne-iPhone Tricks Cishe Ubungazi Ngayo
Sikunikeza amacebo amahle we-iPad ne-iPhone azothuthukisa indlela oxhumana ngayo nedivayisi yakho.
Ungazifihla kanjani izinhlelo zokusebenza kufolda engabonakali ngaphandle kwe-jailbreak
Kulesi sifundo sizokufundisa ukuthi ungazifihla kanjani izinhlelo zokusebenza kufolda engabonakali ngaphandle kwe-jailbreak.
Ungakuthuthukisa kanjani ngokushesha ukusebenza kwe-iPhone yakho
Singakuthuthukisa kanjani ukusebenza kwe-iPhone yethu? Kukhona iqhinga esingalisebenzisa ukukhulula i-RAM kumasekhondi ambalwa.
Umhlahlandlela Omkhulu wokuqonda ukuxhumeka kwakho kwe-Wi-Fi bese uyibeka ezingeni le-iPhone yakho, iMac namanye amadivayisi.
Funda konke odinga ukukwazi ngokuxhumeka kwakho kwe-inthanethi bese ubeka ukuxhumana kwakho kwasekhaya ngokulingana ne-iPhone yakho, iMac namanye amadivayisi.
Ungayilungisa kanjani i- "Redownload Unavaible" ku-App Store
Ngalesi sifundo esilula sikukhombisa ukuthi ungazithenga kanjani izinhlelo zokusebenza esasikade sizibuyise ku-App Store.
Landa amavidiyo we-YouTube ngaphandle kwesidingo sanoma yiluphi uhlelo lokusebenza
Funda ukulanda amavidiyo e-YouTube ngaphandle kokusebenzisa izinhlelo ezivela eceleni ngale ndlela eku-inthanethi.
Ungazikhethela kanjani ukuthi iziphi izinhlelo zokusebenza ezingenziwa isipele ku-iCloud
Uma usebenzisa i-iCloud ukwenza isipele sedivayisi yakho ye-iOS, izinhlelo ozozifaka zizokwenzelwa isipele ku-iCloud.
Ungazivumelanisa kanjani iziqephu zakho ezibukelwe ku-Plex ne-Trakt.tv
Ukuvumelanisa okubonile ne-Plex ku-Trakt.tv kulula kakhulu futhi kuzokusiza ukuthi ulandelele uchungechunge lwakho olubukelwe.
Ungayifaka kanjani imibhalo engezansi ngokuzenzekelayo ku-Plex
Sichaza igxathu negxathu ukuthi ungayilungiselela kanjani i-Plex ukulanda ngokuzenzakalela imibhalo engezansi yama-movie nochungechunge lwakho
Ukuhlola isimo sebhethri se-Apple Pencil yakho, kuzofanela unike amandla iwijethi entsha yebhethri ye-iOS 9 ku-iPhone yakho noma ku-iPad Pro.
Ungakunciphisa kanjani ukusetshenziswa kwedatha ku-iOS 9
Sikulethela amathiphu ongawasebenzisa ukunciphisa ngokuphawulekayo ukusetshenziswa kwedatha yeselula ku-iPhone yakho nge-iOS9.
Ungasusa kanjani ngokuphelele futhi ungasebenzi i-akhawunti yakho ye-WhatsApp
Sikufundisa ukuthi uyisusa kanjani ngokuphelele i-akhawunti yakho ye-WhatsApp ukuze omunye umuntu othola inombolo yakho yocingo angayitholi imininingwane yakho.
Faka i-emulator ye-Nintendo DS ku-iPhone yakho ngaphandle kwe-Jailbreak [NDS4iOS]
Sikukhombisa ukuthi ungayilanda kanjani i-emulator ye-Nintendo DS kudivayisi yakho ye-iOS nokuthi ungayidlulisa kanjani imidlalo oyithandayo kukhonsoli yakho entsha ebonakalayo.
Ungayisetha kanjani iSiri Remote
Sihlaziya kuvidiyo ukuthi yiziphi izinketho zokumisa ezinikezwa yiSiri Remote entsha nokuthi singayisetha kanjani kabusha bese siyibhangqa ne-Apple TV
I-WhatsApp Web ye-iPhone, umhlahlandlela ocacile
Umhlahlandlela kuWhatsApp Web ye-iPhone: funda ukuthi i-WhatsApp web yenziwe kanjani futhi isetshenziswe kukhompyutha futhi ngaphandle kwe-jailbreak.
Ungayifaka kanjani i-emulator ye-PlayStation ku-iPhone
Sikukhombisa igxathu negxathu ukuthi ungayithokozela kanjani imidlalo ye-PlayStation ku-iPhone yakho
Jabulela lezi zimaphephadonga ze-Star Wars ze-iPhone
Ngenkathi silinde ukukhonjiswa kwesiqephu sesikhombisa se-Star Wars, ungajabulela lezi zimaphephadonga ze-iPhone yakho.
Ungazifaka kanjani izinhlelo zokusebenza ezingekho emthethweni usebenzisa i-Xcode
Sichaza ukuthi ungazifaka kanjani izinhlelo ezingekho ku-App Store kumadivayisi wethu we-iOS naku-tvOs sibonga iXcode.
Ungayifaka kanjani iSafari ku-Apple TV
Abaduni bakwazile ukufaka iSafari ku-Apple TV futhi sichaza ukuthi singakwenza kanjani.
5 amaqhinga okuba uchwepheshe nge-Apple TV
Sikukhombisa amaqhinga amahlanu ukuze ube ngungoti esizukulwaneni sesine i-Apple TV
Ungasiqopha kanjani isikrini se-Apple TV 4 [Mac]
Ngazo zonke izinto ezintsha ezilethwa yi-Apple TV 4, kungaba umqondo omuhle ukuqopha isikrini sakho. Sichaza ukuthi ungakwenza kanjani ngalesi sifundo esilula
Ungayifaka kanjani imidlalo yeNintendo neSega ku-Apple TV 4
Ngenxa yeProvenance singadlala iMario Bros kanye nezinye ezakudala zeNintendo neSEGA ku-Apple TV 4. Sichaza ukuthi singakwenza kanjani igxathu negxathu.
Ungayisebenzisa kanjani irimothi endala ukulawula i-Apple TV 4
Uma ulahlekelwa yi-Siri Remote, konke kungenzeka futhi nokuningi nge-remote encane kangako, singasebenzisa irimothi endala ukulawula i-Apple TV 4.
Ungadlala kanjani ama-classic consoles ku-Apple TV 4 (ne-iPhone)
Isizukulwane sesine i-Apple TV izosivumela ukuthi sidlale amakhonsoli akudala. Kanjani? Siyakuchazela.
Ungayisetha kanjani i-Apple TV ukuphatha ivolumu namandla ku-TV yakho
Sichaza ukuthi ungayilungisa kanjani i-Apple TV ukuze ukwazi ukukhuphula noma ukwehlisa ivolumu ye-TV, uyivule futhi uyicime ngayo.
Ungakucela kanjani ukubuya kwe-App kusuka ku-iPhone
Ngaphansi kwemizuzu emibili ungacela ukubuyiselwa imali kwentengo yesicelo ku-App Store uma ingazifezekisanga izinhloso zayo.
Ungazithatha kanjani izithombe-skrini kusizukulwane sesi-4 i-Apple TV
Sikukhombisa izindlela ezimbili zokuthatha isithombe-skrini kusizukulwane esisha sesine i-Apple TV
Ungayilungisa kanjani i-Cydia "yehlulekile ukulanda" nge-iOS 9
IPangu jailbreak ye-iOS 9 evela kwi-Mac OS ikhipha isiphazamisi esibizwa ngokuthi "sehlulekile ukulanda" esikukhombisa ukuthi ungalungisa kanjani.
Konke mayelana ne-3D Touch yama-iPhones amasha
Sihlaziya ividiyo ye-3D Touch, ubuchwepheshe obumangalisayo obuguqula indlela oyisebenzisa ngayo i-iPhone yakho
Ungawaguqula kanjani amadivayisi wakho we-Apple owethembekile
Ukubuyekezwa kohlu lwakho lwamadivayisi athembekile kuyindlela engcono yokuqinisekisa ukuthi idatha yakho iphephile
Ngikususa kanjani okuqukethwe okuvela njengokuthi "okunye" ku-iTunes?
Ukuqhubeka nokuphendula eminye imibuzo, kulesi sifundo sizokufundisa ukuthi ungalisusa kanjani ifayela elivela "njengabanye" ku-iTunes.
Ungalilungisa kanjani iphutha -54 ku-iTunes
Iphutha le -54 ukwehluleka okuvame kakhulu ukukubona kuWindows. Ihlobene nomtapo wezincwadi futhi sizozama ukususa konke ukungabaza kwakho.
Ungakhubaza kanjani "amasayithi avamile" ku-Safari ye-iOS 9
Ngalesi sifundo sikukhombisa ukuthi ungasusa kanjani amasayithi avakashelwa njalo kusuka ku-Safari ye-iOS 9.
Ungakwehlisa kanjani kusuka ku-iOS 9.1 kuye ku-iOS 9.0.2
Ku-iPhone ye-Actualidad sikulethela okokufundisa kokuthi wehlise kanjani kusuka ku-iOS 9.1 kuye ku-iOS 9.0.2.
Ungakwehlisa kanjani kusuka ku-iOS 9 kuye ku-iOS 8.4.1 nge-OdysseusOTA 2.0
Ithuluzi elidumile lokwehlisa elibizwa nge-OdysseusOTA libuyekezelwe enguqulweni engu-2.0 ukulanda kusuka ku-iOS 9 kuye ku-iOS 8.4.1
Ungakugwema kanjani ukuqala kabusha kwe-iOS 9 nge-Jailbreak
Ukuqala kabusha kwe-loop ye-iOS 9 Jailbreak ebizwa nge-BLoD kunesixazululo, ku-Actualidad iPhone ngesifundo sethu esikukhombisa sona.
Ungawususa kanjani umculo ku-Apple Music kudivayisi yakho ukuze uvule isikhala
Singavula isikhala uma sisusa izingoma ezigcinwe kudivayisi yethu ye-Apple Music.
ICydia iphahlazeka lapho i-jailbreaking iOS 9? Zama lesi sixazululo
Abasebenzisi abaningi babike ukuthi i-Cydia iyavala lapho i-jailbrokening iOS 9. Sikunikeza isisombululo senkinga.
Ungalilungisa kanjani iphutha lama-29 ku-iTunes
Into yokugcina esifuna ukuyibona lapho sibuyisela nge-iTunes amaphutha, ingasaphathwa eyamaphutha angama-29. Yini esingayenza ukuyilungisa?
Ungalivula kanjani ifayela le-IPSW ku-Mac
/ Ungalivula kanjani ifayela le-IPSW ku-Mac? Kulesi sihloko sikukhombisa inqubo elula yokuvula ifayela ngesandiso se-.ipsw.
Indlela Jailbreak iOS 9 Amadivayisi
Isifundo lapho sikukhombisa khona zonke izinyathelo okufanele uzilandele ukuze ukwazi ukuJailbreak amadivayisi wethu nge-iOS 9
Ungaziguqula kanjani izithombe zakho ezibukhoma ze-iPhone 6s zibe yi-animated GIF
Izithombe ezibukhoma zingenye yezinto ezintsha eza ne-iPhone 6s ne-iPhone 6s Plus, kepha kwesinye isikhathi azikwazi ukwabiwa. Ukuze wenze lokhu, dala kangcono i-GIF.
Ungasibuza kanjani ngaphambi kokususa i-imeyili kuMeyili
Ukugwema ukumangala, kungaba umqondo omuhle ukusebenzisa inketho yokuthi "ubuze ngaphambi kokususa" i-imeyili kuhlelo lweMeyili le-iOS.
Ungazisusa kanjani izitifiketi zempande ku-iPhone yakho noma i-iPad
Izitifiketi zempande eziyimpikiswano ezibeka engcupheni ukuphepha kwethu ku-iOS kulula ukuzisusa ngesifundo sethu.
Ungayidlulisa kanjani idatha yakho yezempilo kwi-iPhone entsha ngaphandle kokubuyisela
Ngalolu hlelo lokusebenza olusha uzokwazi ukudlulisa kuphela idatha yezempilo nomsebenzi ku-iPhone yakho entsha ngaphandle kokubuyisela amakhophi wesipele.
Kungani ukuvala izinhlelo zokusebenza kubi kubhethri lakho?
Namuhla sichaza ukuthi kungani ukuvala izinhlelo zokusebenza ku-iOS kungagcini nje ngokulondoloza ibhethri, kepha kuyikhipha ngokushesha.
Ungazisusa kanjani izitifiketi zempande kudivayisi yakho
Lapho sifaka izitifiketi zempande, sigunyaza ukuthi imininingwane eyimfihlo ingahlungwa bese kubeka ukuphepha kwedivayisi yethu engcupheni.
Ungawabeka kanjani amafolda ngaphakathi kwamafolda ku-iOS 9
Icebo elincane lisivumela ukuthi sifake amafolda kumafolda ku-iOS 9 ngaphandle kwesidingo seJailbreak
Akukhona konke ukwehluleka ohlelweni okukubi. Kwesinye isikhathi sithola eyodwa esivumela ukuthi sibeke amafolda ngaphakathi kwamafolda, njengaleyo evela ku-iOS 9.
Ungabuka kanjani izithombe ezibukhoma kumadivayisi amadala
Ukubuka ukugqwayiza kwezithombe ezibukhoma kumadivayisi amadala kulula, futhi sizochaza ukuthi kanjani.
Ungabelana kanjani ngezithombe ezibukhoma ku-iOS 9
Izithombe ezi-animated noma Izithombe ezibukhoma zingabiwa nganoma iyiphi idivayisi ene-iOS 9 kanye neMac. Sichaza ukuthi kanjani
Ungazilayisha kanjani izithombe namavidiyo we-high definition (HD) ku-Facebook
Ngalesi sifundo esilula, kuzindaba ze-iPad sizokufundisa ukuthi ungazilayisha kanjani izithombe zakho namavidiyo ku-Facebook ngencazelo ephezulu (HD).
Ungasithulisa kanjani ngokuphelele iSiri (cishe)
Ngubani ongakaze afune ukuthi uSiri angaphenduli ngokuzwakalayo? Kusukela i-iOS 9, singamthulisa ngokuphelele uSiri. Sikukhombisa ukuthi kanjani.
Imanuwali yokulungisa i-iPhone
Sikufundisa ukuthi ungayilungisa kanjani i-iPhone yakho igxathu negxathu ngemikhombandlela enemininingwane nezinyathelo ngezinyathelo ukulungisa noma ikuphi ukwehluleka noma ukonakala kuselula yakho ye-Apple.
Lungisa ukuzwela kwe-3D Touch kuma-iPhone 6s akho
I-3D Touch, ngokungangabazeki, iyonaveli entsha eza ne-iPhone 6s ne-iPhone 6s Plus. Uma sifuna, singalungisa ukuzwela kwayo.
Isivivinyo sezinyanga ezintathu se-Apple Music siphelile, ukuthi ungakukhansela kanjani okubhalisile
Ngalesi sifundo esilula sikukhombisa ukuthi ungakukhansela kanjani okubhalisile kwe-Apple Music ngaphambi kokuphela kwesikhathi sokulingwa.
Ungayibona kanjani inguqulo ephelele yewebhusayithi evela eSafari ene-iOS 9
Ngalesi sifundo esilula uzofunda ukuthi ungalayisha kanjani inguqulo yedeskithophu yekhasi lewebhu kusuka ku-Safari ye-iOS 9.
Ungayisebenzisa kanjani i-Activation Lock ku-Apple Watch
Sichaza ukuthi ukusebenza kwe-Apple Watch kusebenza kanjani, indlela yokuphepha okufanele uyazi futhi uyisebenzise
Ungabhangqa kanjani i-Apple Watch yakho ne-iPhone entsha ngaphandle kokulahlekelwa yimininingwane
Sichaza ukuthi ungaxhumanisa kanjani i-Apple Watch yakho ne-iPhone entsha ngaphandle kokulahlekelwa yimininingwane.
Ungakususa kanjani ukubuka kuqala kwezinhlamvu kukhibhodi ye-iPhone
Ngalesi sifundo esilula sikukhombisa ukuthi ungakhubaza kanjani ukubuka kuqala uhlamvu lwekhibhodi ye-iPhone.
Ungangeza kanjani okunamathiselwe kwe-iCloud kuMeyili
IOS 9 isilethela into entsha kuhlelo lokusebenza lweMeyili: ukukwazi ukunamathisela amafayela
Ungayivuselela kanjani i-Apple Watch ku-watchOS 2.0
Sichaza ukuthi ungayibuyekeza kanjani i-Apple Watch enguqulweni yakamuva ye-watchOS
Ungayilungisa kanjani i- "lag" ngemuva kokufaka i-iOS 9
Ngalezi zinyathelo ezilula esikutshela ngazo ku-iPhone News ungalungisa lag ekhonjiswa ku-iOS 9.
Kuvuselelwe ku-iOS 9 futhi angikwazi ukubona amanothi akho ku-Yosemite? Kukhona indlela
Uhlelo lokusebenza lwe-iOS 9 Notes luhle, kepha aluhambisani ne-OS X Yosemite. Senzani uma sesivele sifake i-iOS 9? Kukhona isixazululo.
Ungakwehlisa kanjani kusuka ku-iOS 9.1 Beta kuye ku-iOS 9.0
Sichaza ukuthi ungayifaka kanjani i-iOS 9.0 uma usuvele uku-iOS 9.1 Beta
Ungayilondoloza kanjani i-Apple Watch yakho
Sichaza inqubo yokwenza isipele ngesandla se-Apple Watch yakho ku-iPhone yakho.
Ungayibuyekeza kanjani i-iOS 9: Vuselela noma Buyisela?
Sichaza ukuthi yiziphi izinketho ezahlukahlukene ongazibuyekeza ku-iOS 9, izinzuzo nezinkinga zazo, kanye nenqubo ngayinye yazo
Lungela ukubuyekeza ku-iOS 9
Sikunikeza amathiphu azokusiza ukuthi ulungiselele konke ngaphambi kokubuyekeza ku-iOS 9 futhi ungazisoli ngokwehluleka noma ukulahleka kwedatha.
Ithiphu: Vula ukubalwa kwezinhlamvu
Sikufundisa ukuthi ungakusebenzisa kanjani ukubala kwezinhlamvu ku-iPhone nge-iOS, ukuze ukwazi ukubala inani lezinhlamvu emiyalezweni noma kumaTweets anomkhawulo
Okokufundisa: ungayifaka kanjani i-iOS 9 GM ku-iPhone
Kubukeka sengathi isibuyekezo asiveli nge-OTA, ngakho-ke kuzofanele ukuthi sifake i-iOS 9 GM ngesandla. Sikukhombisa ukuthi kanjani.
Ungawasusa kanjani ama-alamu ku-Apple Watch yakho
Sichaza izindlela ezimbili ezahlukene ukususa ama-alamu ku-Apple Watch yakho
Isebenza kanjani i-imeyili ku-iOS 9
IOS 9 iza nemininingwane emincane emisha, kepha uhlelo lokusebenza lweMeyili lufana kakhulu ne-iOS 8, noma kunezinguquko ezithile.
Ungashintsha kanjani usayizi wefonti ku-iPhone yami nge-iOS 9
Kusuka ku-iOS 8 kungenzeka ushintshe usayizi wombhalo ku-iPhone yethu. Kulesi siqondisi esincane sizokufundisa ukuthi ungashintsha kanjani usayizi wefonti ku-iOS 9.
Isebenza kanjani uhlelo lokusebenza lwezithombe ku-iOS 9
Uhlelo lokusebenza lwezithombe ze-iOS lungenye yalezo esizisebenzisa kakhulu ku-iPhone yethu. Unezinketho eziningi futhi kulo mhlahlandlela sizokukhombisa ukuthi uhlelo lokusebenza lwezithombe lusebenza kanjani
Ungazilungisa kanjani izinkinga nge-Wi-Fi ku-iOS 8.4.1
Uhlobo lwakamuva lwe-iOS lubonakala lunikeza izinkinga uma kukhulunywa ngokuxhumeka kwe-Wi-Fi. Sikukhombisa izinketho eziningi zokuxazulula le nkinga.
Ungayithola kanjani i-emoji yomunwe ophakathi yeWhatsApp
I-Apple ayisivumeli ukuthi sisebenzise i-emoji yomunwe ophakathi ngokwendabuko, kepha sithole indlela yokusebenzisa i-comb emoji ku-WhatsApp
Ungalakha kanjani iqembu loxhumana nabo ku-iPhone
Ngokungaqondakali, ayikho indlela yomdabu yokwenza iqembu loxhumana nabo ku-iPhone. Kule ndatshana sikukhombisa ukuthi ungalakha kanjani iqembu.
Ungazilungiselela kanjani izilungiselelo zenkampani yenethiwekhi ze-iPhone eSpain
Uma ukuxhumeka kwakho kuyeke ukusebenza, ungahle udinge ukulungisa izilungiselelo zesithwali sakho. Lapha sichaza ukuthi ungalungisa kanjani ukuxhumeka kwakho.
Ungayisusa kanjani ikhompyutha ethembekile ku-iPhone yakho noma i-iPad
Sichaza ukuthi ungakuhoxisa kanjani ukugunyazwa kwikhompyutha ukufinyelela i-iPhone yakho noma i-iPad
Manje yisikhathi esihle kakhulu sokufunda ukuthi ungazakha kanjani izinhlelo zokusebenza ze-iOS 9
Sivula iminyango yokuqala emhlabeni wezinhlelo, ungaqala MAHHALA bese uqhubeka nokufunda ngemali yokuhleka, wenze imibono yakho iphile.
Ungayisetha kanjani i-alamu ku-iPhone yami
Siyazi ukuthi abasebenzisi abaningi abazi ukuthi bangayisetha kanjani i-alamu ku-iPhone yakho, ngakho-ke sizokutshela ukuthi ulungiselele isexwayiso ngendlela ejwayelekile nangeqhinga.
Ungayibuyisela kanjani ngaphandle kokulahlekelwa yi-jailbreak
Sichaza ezinye izindlela ezihlukile zokubuyisela idivayisi yakho ngaphandle kokulahlekelwa ithuba lokwenza i-Jailbreak
Ungayisebenzisa kanjani i-WhatsApp ku-iPad
Ekugcineni singasebenzisa i-WhatsApp ku-iPad yethu. Bekumele silinde ukwethulwa kweWhatsApp Web ye-iPhone ukuze sikwazi ukukwenza ngaphandle kwezindaba.
IWhatsApp Web ayilayishi esipheqululini sami. Isixazululo
Njengoba nazi nonke, iWhatsApp Web yaqala ukutholakala nge-iPhone emahoreni angama-24 edlule. Ukuze usebenzise le nketho ...
Ungakwehlisa kanjani kusuka ku-iOS 8.4.1 kuye ku-iOS 8.4
Inqobo nje uma uqhubeka nokusayina, ungokwehlisela ku-iOS 8.4. Sikukhombisa ukuthi ungalanda kanjani uma ufuna ukuba nenguqulo esengozini yokuqhekeka kwejele
Sikufundisa ukuthi ungasebenzisa kanjani ukuzulazula kwedatha ku-iPhone yakho futhi sikukhombise namazinga wokuzula nohambo phesheya.
Amamephu angaxhunyiwe ku-iPhone isinyathelo esilula kakhulu ngesinyathelo
Sikufundisa ukuthi ungawalanda kanjani amamephu ku-iPhone nge-Here Maps kusuka kwa-Nokia, ngakho-ke uzoba namamephu angaxhunyiwe ku-inthanethi ngaphandle kokuxhumeka kwedatha noma i-3G.
I-Apple ikuvumela ukuthi ubuyisele amafayela we-iCloud asusiwe, oxhumana nabo, amakhalenda nezikhumbuzi
I-Apple ingeze isici esisha esikuvumela ukuthi uphinde uthole amafayela asusiwe, oxhumana nabo, namakhalenda avela ku-iCloud.
Ungayifaka kanjani i-iOS 8.4 kudivayisi yakho
IOS 8.4 isengafakwa kudivayisi yakho ukuze i-jailbreak.
Incwadi ye-IPhone ngeSpanishi
Landa imanuwali yokufunda kunoma iyiphi i-iPhone. Funda ukusebenzisa i-Apple mobile nohlelo lwayo lwe-iOS ngalezi zincwadi ezisemthethweni zomsebenzisi.
Ukukhohlisa: Cupha i-Caps Lock ku-iPhone yakho
Sikukhombisa ukuthi ungayisebenzisa kanjani futhi ingasebenzi kanjani iCaps Lock ku-iPhone yakho noma i-iPad ngenguqulo yakamuva ye-iOS. Uyazi iqhinga lokuyisebenzisa?
Amathiphu namasu wezinyoni ezithukuthele 2
Ukunqoba amazinga we-Angry Birds 2 kuzoba lula ngokulandela lezi zeluleko namasu esikukhombisa wona.
Yenza Isipele (isipele) sakho konke okuqukethwe kwe-iPhone yakho: i-SMS, oxhumana nabo, Ikhalenda, amanothi, njll.
Sikufundisa ukuthi ungenza kanjani izipele noma isipele sayo yonke idatha eku-iPhone yakho ngaphandle kokusebenzisa i-iTunes noma i-iCloud.
Ungasishintsha kanjani isithombe sangemuva se-iPhone yami, i-iPad noma i-iPod Touch nge-iOS 9
Sikufundisa ukuthi ungashintsha kanjani noma uhlele iphephadonga kudivayisi yakho nge-iOS 9 futhi sincoma indlela engcono yokukwenza kahle.
Ungayifaka kanjani imidiya yaseSpain ezindabeni zethu ze-Apple
I-Apple News izofika esikhathini esingaphezu kwenyanga futhi njengamanje i-iPhone sifuna ukukulungiselela umcimbi ngokukubonisa ukuthi ungayifaka kanjani imithombo